Kuthetha ukuthini ukuphupha iNdlulamthi? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kuthetha ukuthini ukuphupha iNdlulamthi?
Uhlalutyo lweengxaki linyathelo lokuqala lokuzisombulula ngokulula. Ngale ndlela, ukuphupha indlulamthi kuya kubonakalisa ukuba kufuneka utshintshe umbono wakho ube ngcono. Oku kuyakwenza lula ngakumbi ukuya phambili kwaye ufezekise iinjongo zakho.
Inyani emva koku kukuba ukuze uqonde intsingiselo kuyakufuneka ube nezimo zengqondo ezimbini. Eyokuqala kukukhumbula zonke iinkcukacha ezenzeke ephupheni kwaye ziyinto efanelekileyo kakhulu. Okwesibini kukulingana yenye yeemeko eziqhelekileyo eziya kuthi zikhankanywe kuyo yonke iposi.
1 Ukuphupha indlulamthi kuthetha ntoni?
2 Ukuphupha ubona indlulamthi
3 Ukuphupha uleqa indlulamthi
4 Iphupha NgeeNdlulamthi ezininzi
5 Phupha ngendlulamthi encinci
6 Iphupha malunga nokubaleka kwendlulamthi
7 Iphupha malunga nokuKhwela iNdlulamthi
8 Iphupha NgeeNdlulamthi zeNdlulamthi
9 Iphupha malunga neNdlulamthi yeCub
10 Iphupha malunga nendlulamthi efileyo
11 Ukuphupha indlulamthi eyenzakeleyo
12 Ukuphupha iindlulamthi ezimbalwa
13 Ngaba kusoloko kulungile ukuphupha ngendlulamthi?
Ukuphupha indlulamthi kuthetha ntoni?
Indlulamthi sisilwanyana esikwaziyo ukubona yonke into ephezulu, oko kukuthi, i-prism yayo iya kuba phezulu kakhulu. Olu hlobo lwento lubonisa ukuba ungayisombulula ingxaki ngokulula kunokuba ucinga. Ukucinga ngaloo ndlela kuya kukuthintela ekuchitheni ixesha ucinga ngento omawuyenze.
Eli lixesha elifanelekileyo lokuba ujonge ubomi bakho kwaye utshintshe into ekufuneka itshintshiwe. Ekugqibeleni, uya kubona ukuba kwakulunge kakhulu ukuba uyiqonde le micimbi ibalulekileyo. Ekugqibeleni, ezi zihloko zilandelayo ziya kukubonisa intsingiselo yokuphupha malunga neendlulamthi:
Ukuphupha ubona indlulamthi
Ukuqonda ukuba liphi eli phupha malunga nawe kuyakufuneka ube nesimo sengqondo esilula. Imalunga nokuhlalutya into ekukhathazayo emva koko ungayisombulula. Into ephambili kukusebenzisa eli thuba kwaye ufumane iziphumo ezingcono.
Ukuphupha uleqa indlulamthi
Kukho ukungqubana okukhulu phakathi kokwazi kwakho kunye nokungazi, oko kukuthi, kuya kufuneka unike ingqalelo. Eyona nto unokuyenza kukuzama ukubonakalisa kwaye ke ufumane enye into elungileyo. Isisombululo siphambi kwakho kwaye kungcono ukusihlalutya ngononophelo ngakumbi.
Iphupha NgeeNdlulamthi ezininzi
Inkangeleko yabanye abantu iyakukhathaza kwaye ukuba nelo phupha kuqinisekisile ukuba kufuneka ulumke. Zama ukungamameli abanye abantu abakuxelela kona, kuba ekugqibeleni iya kuba yeyona ndlela ilungileyo.
Phupha ngendlulamthi encinci
Isimo sakho ngokubhekisele kumaphupha akho khange sibe sihle kwaye ubomi buyakugweba ngendlela eyahlukileyo. Ukuze woyise obu bunzima, iya kuba lixesha lokujonga ngcono iingcinga zakho. Khumbula ukuba le nto ucinga ukuba iya kuba sisimo kungekudala.
Iphupha malunga nokubaleka kwendlulamthi
Iingxaki phambi kokwenza ukuba ubaleke kwaye ayisoze ibe yinto elungileyo. Kufanelekile ukuba ube nomonde kwaye uzolile, kuba ekugqibeleni esi iya kuba sesona simo sengqondo sinokubanaso. Ekugqibeleni, uya kubona ukuba nokuba ingxaki imbi kangakanani na, kuya kufuneka unike ingqalelo.
Iphupha malunga nokuKhwela iNdlulamthi
Abanye abantu abakungqongileyo banokuba nezimo zengqondo ezinganiki mdla kwaye kufanelekile ukuba ziqwalaselwe. Kubaluleke ngakumbi ukuba uqaphele, hlala uzolile kwaye ngaphezulu kwako konke ungamameli abanye bathini. Kubaluleke ngaphezu kokuqonda imiba ebaluleke ngokwenene.
Iphupha NgeeNdlulamthi zeNdlulamthi
Umbono wakhe wenyani awuyiyo into elungileyo kwaye uphupha ngendlulamthi apho iinkophe zibonwa khona zibonisa oku. Into ephambili kukuzama ukubona ingxaki kungekuphela kokuphela kwehlabathi kodwa njengethuba. Oku kuyakucingelwa ukuba ube nakho, kuba kuya kuzisa izibonelelo kunye nokufunda okuhle.
Iphupha malunga neNdlulamthi yeCub
Uyila imvakalelo entle kakhulu ngaphakathi kuwe kwaye oko kuyakwenza umahluko ngendlela elungileyo. Eyona nto ilungileyo kuwe kukuzama ukuqonda ukuba ekugqibeleni, uThixo uyasebenza ebomini bakho. Cinga ngayo kwaye uzame ukuba nolwazi ngokwakho, kuba iya kukuzisela izibonelelo ezinomdla.
Iphupha malunga nendlulamthi efileyo
Kubaluleke kakhulu ukuba uzame ukuqonda ukuba iingxaki zinokungaphinde zivele ngenye imini. Ukuba neli phupha kubonisa ukuba usendleleni elungileyo kwaye akukho xesha uya kuba nethuba lokusombulula ezi ngxaki.
Ukuphupha indlulamthi eyenzakeleyo
Esi sisimbo esibi, kuba ukuphupha kwendlulamthi eyonzakeleyo kubonisa ukuba kunokwenzeka ngengozi. Ayizukubanzulu kakhulu kwaye sisilumkiso sokulumka.
Ukuphupha iindlulamthi ezimbalwa
Kungenzeka ukuba ngexeshana elincinci uyifezekise loo njongo uzibekele ekuqaleni. Ukuba inxulumene nolwalamano lothando, uyakufumana uthando lobomi bakho kwaye oko kuya kuba kungekudala.
Ngaba kusoloko kulungile ukuphupha ngendlulamthi?
Iphupha lihlala liqinisekile, kuba libonisa ukuba zonke ezi ngxaki ziya kusonjululwa kwaye azizukuthatha thuba lide. Kodwa ukuze ube nakho ukubeka emngciphekweni, kuya kufuneka utshintshe indawo yokubona kwaye ubone yonke into ivela phezulu. Khumbula zonke ezi nkcukacha, kuba ekugqibeleni iyakwenza umahluko ebomini bakho. Kwaye wena, uyithandile intsingiselo yokuphupha ngendlulamthi?
Kuthetha ukuthini ukuphupha ungumPristi?
Kuthetha ntoni ukuphupha i-Exorcism?